You must supply an apple id - MYSTERY ZILLION
You must supply an apple id
December 2014 in iOS Devlopment
app ကို apple store ပေါ်မတင်ခင် validate လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ "You must supply an apple id" ဆိုပြီး error ထွက်လာပြီးတော့ failed validation ဖြစ်သွားပါတယ်။ အဲ့ဒါ ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ သိချင်လို့ပါ။ googling လုပ်ကြည့်လိုက်တော့ validate မလုပ်ပဲ တစ်ခါထဲ submit တန်းလုပ်လိုက်တော့ ဆိုပြီး ဖြေထားတာတွေ တွေ့ပါတယ်။ ဟုတ်လား သိချင်လို့ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
December 2014 Administrators
submit ကို ဘယ်ကနေ တင်တာလဲ ? Xcode ရဲ့ Organiser က ဖြစ်တယ်ဆိုရင် Application Loader နဲ့ ပြောင်းပြီး တင်ကြည့်ပါလား။
နောက်ပြီးတော့ submit လုပ်ဖို့ကော iTunes Connect မှာ Ready to submit ဖြစ်နေပြီးသားလား ?
December 2014 Registered Users
Xcode ရဲ့ organiser နဲ့ လုပ်တာပါ။ Application Loader နဲ့ ပြောင်းလုပ်လဲ အတူတူပဲ။
ready to submit ဖြစ်ပြီးသားပါ။